Isithombeni sezilwane zasekhaya - iSan Pietro Clarenza
Kuvaliwe: UMsombuluko Ekuseni
Isitolo sezilwane zasekhaya "The imprint" - uSan Pietro Clarenza
Ukuze uthole injabulo yezilwane ezifuywayo.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-16)
Isizinda sonyawo, e-Via Umberto 326 / A a San Pietro Clarenza, è Isitolo sezilwane zasekhaya ezikhethekile ekuthengisweni kwe Okuphakelayo e izesekeli ngayinye Animali ezifuywayo kanye nesikhungo Esikhethekile ku Ukujola. Ukuthengiswa kwemidlwane.
Isitolo se-L'Impronta Pet eSan Pietro Clarenza - Okuphakelayo, ngisho nokwelapha
Isizinda sonyawo è un Isitolo sezilwane zasekhaya, iphuzu eliyisithenjwa seqiniso a San Pietro Clarenza esifundazweni Catania yabathandi Animali nenhlala-kahle yabo. Izisebenzi ze Isitolo sezilwane zasekhaya Isizinda sonyawo lunazo zonke izinsuku zokumsiza Animali isilwane ukuze siphile isikhathi eside, sinempilo futhi sijabule, senza ulwazi lwazo litholakale kubanikazi bazo. Ukunakekela abangane bakho abanezinyawo ezine ngendlela efanele kubalulekile empilweni yabo futhi ukwenza lokhu udinga ukubathenga Okuphakelayo zilungele kangcono izidingo zabo zokudla okunempilokuzo zonke izigaba zokukhula kwaboNgaphezu kwalokho, at Isitolo sezilwane zasekhaya i-L'Imp Pamba esifundazweni Catania troverete Okuphakelayo ngayinye Izindlela Zokudla Zokulapha nomkhiqizo Izilwane ezincane okukhethekile.Isizinda sonyawo, Isitolo sezilwane zasekhaya a San Pietro Clarenza, esifundazweni Catania, nomainikeza amakhasimende ayo okunezinhlobonhlobo eziningi Okuphakelayo yomile noma imanzi, Ikhwalithi,lemikhiqizo emihle kakhuluee eqinisekisiwe, eqondene nezinja, amakati, izinyoni, ama-hamsters, onogwaja bazo zonke izinhlobo zezinja.
Isizinda sonyawo Isitolo sezilwane zasekhaya eSan Pietro Clarenza - Ukujola
Isizinda sonyawo, Isitolo sezilwane zasekhaya a San Pietro Clarenza, esifundazweni Catania, futhi Isikhungo Esikhethekile ku Toselattura. Ngaphezu kwe Ukujola vnezinsizakalo ziyahlinzekwa Ukucheba e Ukusika isikhafu, kanye nezomuntu, ezesikhumba kanye nezokuhlelwa izibulala-zinambuzane (ngokumelene namazeze, imikhaza, izintwala nezimbuzane) ukwenza isilwane sakho sihle futhi sihlanzeke. The Isitolo sezilwane zasekhaya Isizinda sonyawo isiqinisekiso senkonzo Ukujola ngiyabonga ephelele futhi ephephile kubasebenzi bayo abaqeqeshiwe nokusetshenziswa kwe okokuhlanza okuthile kwe-hypoallergenic ukukunikeza ukusebenza okuphezulu kanye nobungozi obuncane bokungezwani komzimba.
Izimbiza Zokuthengisa Imprint eSan Pietro Clarenza - Imikhiqizo nezesekeli zezilwane
Funa onkulunkulu Cuccioli a Catania? The Isitolo sezilwane zasekhaya i-L'Imp Pamba ngokukhethekile ku Ukuthengiswa kwemidlwane, ikakhulukazi iCagnolini neGattini, eqhamuka e-Italy Breeders. Lapho Ukuthengiswa kwemidlwane iphethwe ngokuphepha nangokuhlonipha impilo yabangane bakho besikhathi esizayo abanohlonze. Ngaphezu kwalokho, i Isitolo sezilwane zasekhaya i-L'Imp Pamba ine-assortment enkulu yamathoyizi, Izithwali, amaLeather, ama-Kennels, amakheji nakho konke okudingayo kubangani bakho abanezinyawo ezine ngokuqaphelisisa okukhokhelwa kwikhwalithi nokuphepha. Konke lokhu nokuningi kungatholakala ku Isitolo sezilwane zasekhaya Isizinda sonyawo, a San Pietro Clarenza esifundazweni saseCatania. Da Isizinda sonyawo tanti Ukudla kwezilwane imikhiqizo ephezulu yemikhiqizo kanye nemikhiqizo yokunakekelwa nokudlalwa kwezinja, amakati, onogwaja, amahhashi nezinye izilwane ezincane ngamanani asizisayo ngaso sonke isikhathi. Okubanzi okukhulu kakhulu Ukudla kwezilwane akhethwe phakathi kwezinkampani ezihamba phambili kulo mkhakha, ezahlukene izesekeli eImikhiqizo yezempilo kanye Ukujola okwakho Animali.
I-Imprint eSan Pietro Clarenza - Isitolo sezilwane ezijabule
Isizinda sonyawo, Isitolo sezilwane zasekhaya a San Pietro Clarenza, esifundazweni saseCatania, iyathengiswa Okuphakelayo e izesekeli ngayinye Animali Isikhungo Sekhaya Nezindawo ezikhethekile ku Ukujola. Isitolo sezilwane zasekhaya Isizinda sonyawo ihlala isesikhathini ngezindaba zakamuva zokudla nokudla kahle Animali futhi ngifuna okungcono kakhulu Okuphakelayo, futhi nemibuso yokudla okwelaphayo, khona emakethe. Imikhiqizo eminingi yokugcina izilwane zakho ziphilile, ziqinile futhi zihlanzekile ngamanani atholakala ngaso sonke isikhathi: Abasebenzi be Isitolo sezilwane zasekhaya I-Imprint esifundazweni saseCatania izokuqondisa ngezeluleko ngokucophelela ekukhetheni umkhiqizo ofanele ngokuya ngezidingo zakho Animali. Ngaphezu kwalokho, izinsizakalo ze Ukugeza nokugeza ngamathambo okugeza imininingwane eyenziwe abasebenzi abaqeqeshiwe. Uma ufuna okungcono kakhulu kubangani bakho abanezinyawo ezine, woza Okuphakelayo waya Ukujola, khetha i- Isitolo sezilwane zasekhaya Isizinda sonyawo a San Pietro Clarenza esifundazweni saseCatania.
Ikheli: Via Umberto, 326 / A
Idolobha: San Pietro Clarenza
I-POSTAL CODE: 95030
Umakhala ekhukhwini: 370 1219977
Email: infopetimp Pamba@libero.it
Iwebhusayithi: www.limp Pamba.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 05034170877